तुलनात्मक रूपमा सस्तो खर्चमा टेस्ट ट्युब बेबी सेवा दिनेछौं – डा. संगीता मिश्रा — Imandarmedia.com
काठमाडौ। यही मंसिर १५ गतेदेखि परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालमा टेस्ट्युब बेबी सम्बन्धी नयाँ प्रविधिको सेवा सुरु हुँदैछ। निःसन्तान सम्बन्धी समस्यामा यसअघि नै गर्दै विभिन्न उपचार विधि अपनाउँदै आएको अस्पतालले टेस्ट्युब बेबी सम्बन्धी सेवा मंसिर १५ गतेदेखि सुरु गर्न लागेको अस्पतालकी निर्देशक डा. संगीता कौशल मिश्राले जानकारी दिइन्।
प्रसूति गृहको इतिहासमा पहिलो पटक जोडिन लागेको यो प्रविधिले सेवाग्राहीमा के कस्तो सुविधा प्रदान गर्छ त ? निर्देशक मिश्रासँग यस विषयमा हामीले केही प्रश्न गरेका थियौं। प्रसूति गृहले निकै पछि टेस्ट्युब बेबी सम्बन्धी सेवा दिन थाल्यो, यसको आवश्यकता किन देखियो ?
प्रसूति गृहमा महिला र गर्भावस्था सम्बन्धी समस्या लिएर आउनेहरुमध्ये कतिपयमा निःसन्तान सम्बन्धी समस्या देखियो। त्यस्ता समस्याहरु कतिपय त औषधि उपचार गरेर निको हुने खालका थिए, कतिपयलाई भने औषधिले पनि निको गराउन सकेन।
त्यसपछि टेस्ट्युब बेबीसम्बन्धी सेवा प्रसूति गृहमा पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले यो सेवा सुरु गर्न लागेका हौं। कस्तो अवस्थामा टेस्ट ट्युब बेबी जरुरी हुन्छ ? टेस्ट्युब बेबी सबैखाले निःसन्तान दम्पतीको लागि आवश्यक पर्दैन।
पहिले त हामी के कारणले उहाँहरुको बच्चा भइरहेको छैन ? त्यो हेर्छाैं। बच्चा नजन्मिनुमा पनि विभिन्न कारणहरू हुन्छन्, जस्तो कहिलेकाहीँ श्रीमतीको अण्डाशयमा अण्डा नबन्ने, नली बन्द हुने, श्रीमानकै वीर्य नपुग्नु आदि हुन्छ।
त्यसैले हामी पहिले निःसन्तान दम्पतीको समस्याको कारण हेरेर त्यसको उपचार खोज्छौं। टेस्ट्युब बेबीको सेवा अन्तिम अवस्थामा लिने हो। श्रीमानको वीर्य कम भएर सन्तानोत्पादन नभएको हो भने औषधि दिएर श्रीमानको वीर्य बढाइन्छ।
यसरी, अनेक विधि अपनाउँदा पनि महिलाको पेटमा गर्भ बस्न सकेन भने मात्रै हामी टेस्ट्युब बेबी प्रविधिमा जान्छौं। सकेसम्म हामी उपचार गरेर नर्मल हिसाबले नै बच्चा जन्माउन सकून् भन्ने चाहन्छौं।
टेस्ट ट्युब बेबीको लागि दम्पतीले के कस्ता प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ ? यो प्रविधिमा सबैभन्दा पहिले हामीहरू हर्माेनल टेस्ट गर्छाैं। त्यसपछि श्रीमान् र श्रीमतीमा कसको कारणले गर्भ रहन सकेन भन्ने परीक्षण गर्छाैं।
त्यसपछि अण्डा बनाउने सबै अंगहरुको अवस्था हेर्छाैं। ती सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सकेसम्म हामी औषधि उपचारको उपाय अपनाउँछौं । पहिले हामी अण्डा उत्पादन गर्ने औषधि दिएर उत्पादनमा जोड दिन्छौं।
त्यतिले पनि भएन भने बल्ल श्रीमतीको अण्डा र श्रीमानको वीर्य निकालेर निशेचनको प्रक्रिया बाहिर गरिन्छ। जब भ्रूण २/३ दिनको हुन्छ, त्यसपछि भ्रूणलाई महिलाको शरीर भित्र प्रवेश गराइन्छ।
यो आमाको गर्भमा नै बस्ने भए पनि यसको निशेचन भने बाहिर गरिन्छ। यही नै यसको प्रक्रिया हो। कतिपय आमाको अण्डा बन्दैन वा श्रीमानको वीर्य राम्रो छैन भने उनीहरुकै परिवारको वा बाहिर कसैको अण्डा वा वीर्य लिएर यो प्रक्रिया पूरा गरिन्छ।
बच्चा पेटमा राखिसकेपछि विभिन्न किसिमका हार्माेन तथा औषधि दिएर गर्भाधानलाई सहयोग गर्ने गरिन्छ। टेस्ट ट्युब बेबीका लागि कुल खर्च कति लाग्छ ? यसमा लाग्ने औषधिहरु एकदमै महँगो हुने गर्छ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि टेस्ट्युब बेबीको लागि सबै औषधिसहित गरेर कुल खर्च २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। बजारमा अन्यत्र ३ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ । तर यहाँ अन्यत्रभन्दा धेरै सस्तो छ।
टेस्ट ट्युब बेबीका लागि औषधि वा उपचार कति सहज छ ? टेस्ट्युब बेबीको औषधि उपचारको लागि त्यस्तो असहज छैन। यसमा गोपनीयता चाहिने र धेरै समय लाग्ने भएकोले त्यसको लागि हामीले छुट्टै ओपीडीको व्यवस्था गरेका छौं।
यसले गर्दा यसको औषधि उपचारको लागि असहज हुँदैन। टेस्टट्युब बेबीका लागि पहल गरिरहेका दम्पतीहरु यसबाट कति आशावादी हुन सक्छन् ? अर्थात् यसको सक्सेस दर कति छ ?
विश्वकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने ४० देखि ५० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रगति दर यसमा छैन। हामी पनि त्यही हिसाबमा प्रगति हासिल गर्ने सोचमा छौं।अहिले यस किसिमको सेवा लिन आउने दम्पती कति छन् ? बढ्दो छ वा सामान्य छ ?
दैनिक १५ देखि ४० जना महिलाहरु कुनै न कुनै किसिमको निःसन्तान सम्बन्धी समस्या लिएर आउने गर्छन्। यसमध्ये टेस्ट्युबेबीकै प्रविधि अपनाउनु पर्ने भने धेरै छैनन्। अहिले २५–३० जना महिलाहरु टेस्ट्युब बेबीको सेवाका लागि नाम टिपाएर बस्नु भएको छ।
पहिले प्रविधि विकास हुँदै थियो, प्रविधिको जडान भइसकेपछि यसको प्रयोग गर्नको लागि भनेर उहाँहरु कुरेर बस्नु भएको छ ।प्रसूति गृहमा दैनिक औसत् कति प्रसूति गराइन्छ ?
अहिले प्रसूति गृहमा दैनिक औषतमा ६०–८० जना जति सुत्केरी हुने गरेका छन्। कुल ८० जना दैनिक प्रसूति हुँदा ५५ जनाको हाराहारीमा नर्मल डेलिभरी हुन्छ। बाँकी सिजेरियन विधिबाट हुन्छ।